Sarimihetsika – Andhy Prod: hivoaka ny DVD « Kala Pam’s moderina » | NewsMada
Hivoaka DVD manerana ny Nosy, ny alatsinainy 5 oktobra izao, ilay tantara « Kala pam’s moderina», vokatra voalohany ho an’ny Andhy Prod, trano mpamokatra vaovao horonantsary nitsangana tato anatin’ity taona 2020 ity. Araka ny nambaran-dRamatoa Haingo Volatsinana, tomponandraikitra voalohany ao amin’ity trano mpamokatra ity, « hitondra rivo-baovao ao anatin’ny tontolon’ny sarimihetsika malagasy ny tena antom-pisianay satria efa nankafy ity zavakanto iray ity hatramin’izay rahateo izahay ».
Hivoaka DVD avy hatrany ity sarimihetsika ity satria « hiavaka tanteraka ity andiany manaraka ity raha mitahy tamin’ireo « Kala Pam’s » andiany voalohany sy faharoa izay efa nivoaka teo aloha », hoy ny tompon’andraikitra. Raha ny fanazavana hatrany, amin’ny maha « Kala pam’s moderina » azy mantsy, nezahina hifanaraka amin’ireo zava-misy sy vanim-potoana iainana ankehitriny ny fanomezana aina ny tantara.
I Nessy Andriamalala no nanoratra ary ny «Ducker Image» kosa no niandraikitra ny fanatontosana sy ny fiantsorohana ny lafiny teknika. Ahitana an’i Nessy, i Lanja (Vola) ary i Haingo Volatsinana kosa eo amin’ ny filalaovana. Teny Anosy Avaratra ny toerana nandraisana ny sary.